Glimpses on Translations in Burmese Literary World – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 12 November 2009 17 February 2010 Categories Conviction, Reproduction
8 thoughts on “Glimpses on Translations in Burmese Literary World”
Ywet War says:
13 November 2009 at 7:55 am
စာရေးဆရာ ဘလော့ဂါ ဆရာအတ္တကျော်သို့….
ကျွန်တော်က ဆရာ့ဘလော့ဂ်ကို အားပေးနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကိုယ်တော့ အသစ်မတင်နိုင်လို့ လာပြီးနှုတ်ဆက်သူတွေတွေ့ရရင် အားနာတာနဲ့ မရောက်ဖြစ်တာကြာသွားပြီ။ အသစ်လည်းမတင်ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတော့ ဆရာကတော့ ကျွန်တော့စာတွေကို ဖတ်ဖူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ဆရာ့ဆီမှာ ကွန်မန့်ရေးတာ ဒါပထမဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြောစရာရှိရင် တည့်ပြောတတ်တယ် ဆရာ၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါရစေ။ တစ်ခါကတော့ ဘလောဂါ မမကြီးတစ်ယောက် ကျွန်တော် ကွန်မန့်ရေးပြီး သိပ်မကြာဘူး ကွန်မန့်တွေပိတ်သွားတာ တွေ့ဖူးတယ်။ ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက် ဖြစ်သွားသလားတော့ မသိဘူး။ ဆရာကတော့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူ ဆိုတော့ အဲဒီလိုကြီး မတုန့်ပြန်လောက်ဘူးလို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်အဖြစ် တင်ချင်ရင်လည်း တင်ရအောင် ကွန်မန့်လေးကို “စာရေးဆရာ ဘလော့ဂါ ဆရာအတ္တကျော်သို့….” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားလိုက်တယ်။
“ဆရာနွမ်ဂျာသိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော် “တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ”ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ မကြာသေးခင်က စာရေးဆရာ “မျိုးကိုမျိုး”က ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် ထုတ်လာပါတယ်။ “….ချီ On Plagiarism အင်တာဗျူး ပို့စ်ကတည်းကပါ။
အဲဒီပို့စ်ထဲက ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အမြင်လေးလည်းပြောချင်တယ်။ ဆရာ့ကိုလည်း ဝေဖန်ချင်တယ်။
ဝတ္ထုအမည်တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်ကတော့ ပြဿနာလို့ မမြင်ဘူး။ ပထမအနေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ရကောင်းမို့လား ဆိုပြီး ထစွပ်စွဲတဲ့လူကို အပြစ်တင်ချင်တယ်။ စာတစ်ပုဒ်က ရေးပြီးလို့ ပရိတ်သတ်ကို ချပြပြီးသွားရင် ငါပိုင်တယ်၊ ငါပိုင်တယ် ရယ်လို့ စွဲလမ်းမနေသင့်ဘူး။ အဲဒီထဲက ဝေါဟာရတွေရော အဲဒီထဲက အသိပညာ ဗဟုသုတပါ မကျန်အောင် ဖတ်တဲ့သူကလည်း ရေးတဲ့သူ နည်းတူ ပိုင်ဆိုင်သွားပြီ။ အဲဒီအသိတွေ အဲဒီဗဟုသုတတွေနဲ့ စာတစ်ပုဒ်ရေးချင်ရေးမှာပေါ့။ တည့်ကူးချင်လည်း ကူးမှာပေါ့။ ကိုးကားချင်လည်း ကိုးကားမှာပေါ့။ သိပ်သဘောကျနေတဲ့ ဝေါဟာရကို အလုံးလိုက် ဆွဲသုံးချင်လည်းသုံးမှာပေါ့။ အဲဒီလိုမှအသုံးမခံနိုင်ရင် အစကတည်းက ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကိုယ့် ဟာကိုယ် သိမ်းထားကြတော့လို့ပဲ အကြံပေးချင်တယ်။
ကူးချ(ကိုးကာ) တဲ့နေရာမှာ ရိုးသားတဲ့သူကို ဘယ်ထဲက ကူးချ(ကိုးကား)တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြလိမ္မယ်။ မရိုးသားတဲ့လူကတော့ ကိုယ်တိုင်ရေး လိုလို ဘာလိုလိုလေး လုပ်လိမ္မယ်။ ဒါက သူ့ကိစ္စပဲ သူ့သမိုင်း သူရေးတာပဲဆိုပြီး လွှတ်ထားပေးရမှာ။ ပြီးတော့ ငါကရှေ့ကရေးထားတာပဲဆိုပြီး ဆင်တူတာလာတိုင်း ငါ့စာဖတ်ပြီး လုပ်စားနေတယ်လို့ မထင်သင့်ဘူး။ သူ့အကြောင်းနဲ့သူ တိုက်ဆိုင်တာလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ့်စာတစ်အုပ်လုံးကို မျက်နှာဖုံးတင်ပြောင်းပြီး နာမည်ယူလောက်အောင် အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံလာရရင်တော့ သင့်တော်သလို ဆုံးမရမှာပေါ့။ လိုအပ်ရင် (ဥပဒေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်) တရားပါစွဲရမယ်။
ဒါက ရိုးသားတဲ့လူနဲ့ မရိုးသားတဲ့လူကို ခွဲပြတာ ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့လူ ရှိနိုင်သေးတယ်။ သူကတော့ ရိုးလည်းမရိုးသားဘူး၊ လူထင်ကြီးလည်းခံချင်သေးတယ် ဆိုတဲ့လူမျိုးပါ။ သူကတော့ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ဉာဏ်ရည်တူသွားတာပါဆိုတဲ့ကိစ္စကို ဆင်ခြေဆင်လက် အမျိုးမျိုးပေးပြီး ပုံဖော်လိမ္မယ်။ တကယ်တော့ သူ့ဆင်ခြေတွေ လေ့လာကြည့်ရင် အခြားလူရဲ့ စာပေကို သူအမှန်တကယ် ကူးချထားတာပါ ဆိုတာ ဝန်ခံထားတာတွေ့ရနိုင်တယ်။
စွပ်စွဲချက်တုန့်ပြန်သူကိုလည်း ဝေဖန်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်က ဆရာမျိုးကိုမျိုးရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ကို မဖတ်ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အင်တာဗျုးမေးသူရဲ့စကားရယ် ကွန်မန့်တစ်ခုရယ်ကိုးကားရရင် သူ့တုန့်ပြန်ပုံက မသိမ့်မွေ့တာတော့သေခြာတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ်ကမသိလို့သုံးတာဆိုရင်လည်း မသိလို့ပါလို့ ဒီလိုရှိမှန်းသိရင် မသုံးပါဘူး တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ပထမစာအုပ်က ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးကြီး ကိုယ်မဖတ်ဖူးရင် မသိဘူးပေါ့။ ဒါဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။
သိသိကြီးနဲ့ ကူးတာဆိုရင်လည်း သိပ်ကြိုက်လို့ယူသုံးလိုက်တာပါ၊ မူလစာရေးဆရာက မကျေနပ်ရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ကွန်မန့်ထဲမှာပြောထားတဲ့ အတိုင်းသာ သူတုန့်ပြန်ခဲ့ရင် သူဟာ ကူးချသူ အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း ဝန်ခံသလိုဖြစ်နေပြီး၊ ကူးချထားတဲ့ မူလစာရေးသူကိုလည်း အလေးမထားရာကျနေတယ်။ အဲဒါသူ့အတွက်ရော ကိုယ့်အတွက်ပါ အရှုံးချည်းပဲ။ လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုး။
တုန့်ပြန်သူကို ဝေဖန်တဲ့ကိစ္စ ဒီမှာပြီးပါပြီ။
အဲဒီပို့စ်ထဲက ဆရာပြောသွားတဲ့ အောက်ပါစကားလေးလည်း နည်းနည်းဝေဖန်ပါရစေ။
အတ္တကျော်။	။နာမည်တွေကို ဖယ်ပြီး ပြောရအောင်ဗျာ။ ကနေ့လူငယ် အများစုဟာ နီတိကို မသင်ခဲ့ရတော့ မိကောင်း ဖခင် သားသမီးတွေ မဟုတ်ရှာကြတော့ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
မိကောင်း ဖခင် သားသမီး မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကလေးတွေက စကားအရာမှာ မလိမ္မာကြတော့ဘူး- လို့ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ မိဘတွေကို ထိခိုက်ပြီး ပြောစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ သားသမီး ဆိုးချင်သလောက်ဆိုးပါစေ မိဘတွေ ကောင်းရင် မိဘတွေကတော့ မိကောင်းဖခင် တွေပါပဲ။ သားသမီးတွေ လိမ္မာကြဖို့ မိဘတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောရင်လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိဘကောင်းတိုင်း သားသမီး မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာလည်း အသေအခြာပါပဲ။ နီတိမသင်ရတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆီမှာ စနစ်တကျကိုပဲ သင်ယူချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နီတိမသင်ဘူးတိုင်းတော့လည်း မရိုင်းစိုင်းကြပါဘူး။ ၂၀-၄၀ တန်း လူငယ်တွေကြားမှာပဲ အလွန်တရာယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့ပြီး လူကြီးသူမကို ရိုသေသူတွေ အများကြီးပါ။
On Plagiarism ဆိုတဲ့အင်တာဗျူး ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချင်တာတွေ ဒီမှာပြီးပါပြီ။ ဟိုးပို့စ်အဟောင်းက အကြောင်းအရာတွေ ပို့စ်အသစ်မှာလာပြီး တင်တယ်ဆိုပြီး ဆရာကတော့ နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေမလား မသိဘူး။ အောက်က ဆက်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်းတွေပါနေလို့ တွဲပြီးရေးလိုက်ရတာပါ ဆရာ။ ကွန်မန့်သိပ်ရှည်သွားရင် သီးခံပြီး ဖတ်ပေးပါ။
ဒီနေရာက စပြီး ဘာသာပြန်သမား အမှားဗရပွေ ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို ဝေဖန်ပါ့မယ်။ ဆရာရေးထားသမျှထဲက ပြန်ပြီးကိုးကားချင်တဲ့ အချက်ကလေးတွေကို ကူးယူလိုက်တာနဲ့တင် စာမျက်နှာ ၂-ခု စာရလိုက်တယ်။ စမိမှတော့လည်း စုံစုံလင်လင် ထောက်ပြဝေဖန်ပါရစေတော့။
အတ္တကျော်။	။ (၁) အဆိုပါ စာရေးသူများ၏ အင်အားနှင့် အချိန်များ အလဟဿ ပြုန်းတီးသွားပါသည်။
ဒီထဲမှာ ဆရာက အချိန်တွေ လုပ်အားတွေ အလဟဿ ပြုန်းတီးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်တလဲလဲပြောထားတာတွေ့ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အဲဒီအကြောင်းထပ်ပါသေးတယ်။ အလဟဿဆိုတာ ကျွန်တော်ကတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အလဟဿဆိုတဲ့စကားကို သုံးချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ ပြောလို့ရနိုင်တယ်။
အခြေအနေ(က) ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဘာသာပြန်ခြင်း
ဘာသာပြန်ခြင်းကိစ္စကိုပဲ ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ လေ့လာနေသူဆိုပါစို့။ အဲဒီလူက အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ တစ်မျက်နှာစီ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ဝယ်လိုက်တယ်။ ဝယ်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တယ်။ မြန်မာလိုပြန်တယ်။ ဘာသာပြန်စာရေးဆရာရဲ့ ပြန်ဆိုချက်နဲ့ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပြန်ဆိုချက်ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်တယ်။ သူပြန်တာပိုကောင်းတယ် ငါပြန်တာပိုကောင်းတယ်ရယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတယ်။ အဲဒီဘာသာပြန်ဆိုချက်ဟာ စာအုပ်အဖြစ် ထွက်လာသည်ဖြစ်စေ ထွက်မလာသည်ဖြစ်စေ ပြန်ဆိုသူရဲ့ လုပ်အား ပြုန်းတီးတယ်လို့ ပြောသင့်သေးပါသလား။ အခြားလူပြန်ပြီးသားကို ပြန်ရမို့လားဆိုပြီး အပစ်တစ်စုံတရာ ဆိုချင်သေးပါသလား။ သူက ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ကို ပညာရပ်တစ်ခုလိုလေ့လာပြီး သူ့ရဲ့ ဘာသာပြန်စွမ်းရည်ကို တိုးတတ်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပဲလေ။
အခြေအနေ(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဘာသာပြန်ခြင်း
စာရေးပြီးထမင်းစားနေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာရေးသူတစ်ယောက် ဆိုပါစို့။ သူကတော့ ဈေးကွက်မှာ ရောင်းလို့ကောင်းနိုင်မယ်ထင်တဲ့ စာကိုရွေးပြီး ပြန်ရမှာပဲ။ တတ်နိုင်ရင် အခြားလူထက်လက်ဦးမှု ရအောင်လည်း စီစဉ်ရမှာပဲ။ ဈေးကွက်မှာ သွက်သွက်လက်လက်ဖြန့်နိုင်တဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရမှာပဲ။ အဲဒါတွေ သူ့အတွက်သိပ်အရေးကြီးတယ်။ သူ့ဘာသာပြန်ဆိုမှု ကောင်း/မကောင်း၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အပေါ် စေတနာပါ/မပါ ဆိုတာက စာအုပ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း စာဖတ်သူတွေလုပ်ကြလိမ္မယ်။ ဝေဖန်ရေးသမားတွေလုပ်ကြလိမ္မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်တဲ့နေရာမှာ တရားဥပဒေအရ လုပ်ခွင့်ရှိရင် ရှေ့လူရှိရှိ/မရှိရှိ လုပ်ကောင်းပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာရေပဲ လူတိုင်းသောက်ပေါ့။ အခြားလူပြန်ပြီးသား လိုက်ပြန်တယ်။ သူ့အတွက်ရောင်းအားကောင်းတယ် ဘာလုပ်အားပြုန်းတီးသေးသလဲ။ အခြားလူပြန်ပြီးသား လိုက်ပြန်တယ်။ အရှုံးပေါ်တယ်။ သူ့အကြောင်းနဲ့ သူ လိုက်ပူမနေပါနဲ့။
စီးပွားသက်သက်ကိုကြည့်ပြီး ပရိတ်သတ်ကို စေတနာမထားရင် စာရေးဆရာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ထမင်းဆိုင်၊ မုန့်သည် နဲ့ ရေခဲရေ ရောင်းသူတောင် ကြာရှည်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး လို့ထင်တယ်။ အဲဒါလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူ။ လုပ်အားပြုန်းတီးတယ်ရယ်လို့ ကိုယ်က လိုက်ပြီး နှမြောတသနေစရာ မလိုပါဘူး။ သူ့လမ်းသူလျှောက် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ပေါ့။
အခြေအနေ(ဂ) ရှေ့လူပြန်ဆိုချက်ကို အားမရလို့ ပြန်ဆိုခြင်း
ဒါမျိုးလည်းရှိနိုင်တာပဲ။ ရှေ့လူက ဘာသာပြန်ထားတယ်။ သူပြန်တာကို မကြိုက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူ့ထက်သာမယ်ထင်လို့ လိုက်ပြန်တယ်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင် ပရိတ်သတ်ကို ပိုပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဘာသာပြန်ချက်တွေပေးချင်လို့ စေတနာ တစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ အပင်ပန်းခံပြီး အခြားအလုပ်တွေ မလုပ်နိုင်ပဲ သူတပါးလုပ်ထားတဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့ ဟာကြီးကို ကိုယ်က ဝင်လုပ်တယ်ပေါ့။ ဒီကိစ္စမှာလည်း လုပ်အားပြုန်းတီးတယ်ရယ်လို့ ဆိုစရာမရှိပါဘူး။
အခြေအနေ(ဃ) စီမံချက်တစ်ခုချပြီး အုပ်စုဖွဲ့ ပြန်ဆိုခြင်း
ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေ စုမိကြတယ်၊ သူတို့တစ်တွေ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သိပ်ကြိုက်နေတဲ့ စာအုပ် (၁၀) အုပ်လောက်ကို မြန်မာစာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက် မျှဝေချင်လွန်လို့ အလွန်တရာ အရေးတကြီး ပြန်ဆိုပေးဖို့ ဝေခွဲတယ် ဆိုပါစို့။ အခြားလူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို လိုက်မလုပ်သင့်ဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်နှောင့်နှေးပြီး (၁၀) အုပ်အမြန်ပြီးဖို့ အချိန်အလကားကုန်သွားမယ်။ လုပ်အား အလကား ကုန်သွားမယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဆရာပြောတဲ့ “စာရေးသူများ၏ အင်အားနှင့် အချိန်များ အလဟဿ ပြုန်းတီးသွားပါသည်။” ဆိုတဲ့စကားလေး သုံးသင့်တယ်။
အဲဒီတော့ မေးစရာရှိတာက ဆရာ အစာမကျေဖြစ်နေတဲ့ “ဟစ်လရီကလင်တန့် ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ” ကို နောက်က လိုက်ပြန်သူ စာရေးဆရာတွေက ဆရာနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့မိပြီး ကိုယ့်တာဝန်သူ့တာဝန် ကျေကျေနပ်နပ် ခွဲခြားထားကြလို့လား။ မဟုတ်ရင်တော့ ဆရာ့စကား မသုံးသင့်ဘူး။ အခြေအနေ (ဂ) မှာလို စဉ်းစားကြည့်ရင် ဆရာပြန်ဆိုတဲ့ အခန်ဆက်တွေကို အားမရလို့များ လုပ်လိုက်ရတာလား။ ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲ။
အတ္တကျော်။	။ (၂) စာဖတ်သူများအတွက်လည်း စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှပါသည်။
စာအုပ်တစ်တအုပ်တည်းကို လူအများ ပြန်ဆိုထားသည့် စာအုပ်များထွက်လာသောအခါ ဘယ်သူပြန်တာ ဖတ်ရင်ကောင်းမလဲဟူသော ပြဿနာမှာ စာဖတ်သူတိုင်း စဉ်းစားရသော ပြဿနာဖြစ်လာပါ သည်။
ဒီနေရာမှာလည်း ဆရာက စာဖတ်သူရဲ့ ပြဿနာကို တွေးပြီးပူနေတယ်။ စာရေးသူက စာဖတ်သူအတွက် ပူပေးတာ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ခု စဉ်းစားစရာရှိတာက ၂-မူရှိနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ရွေးချင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့။ အချို့က ပုဂ္ဂိုလ်စွဲနဲ့ ရွေးချင်လည်းရွေးကြမှာလေ။ ရွေးချယ်စရာ ရှိနေခြင်းက စာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက် ပိုကောင်းတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ အရွယ်အစားနဲ့ ရွေးမယ်၊ တန်ဖိုးနဲ့ရွေးမယ်၊ အရေးအသားနဲ့ ရွေးမယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲနဲ့ရွေးမယ်။ ဒါသိပ်ကောင်းတာပေါ့။
ဥပမာပြောရရင် ပါဠိဘာသာနဲ့ရှိနေတဲ့ မိလိန္ဒပဉှာကျမ်းကို ပိဋကတ်တော် မြန်မာပြန်မှာ ဖတ်လို့ရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ နောက်တော့လည်း အသေးလေးတွေထွက်လာသေးတာပဲ။ လုပ်အားမပြုန်းတီးပါဘူး။ ပိဋကတ်တော် ဘာသာပြန်က ကျမ်းကြီးကို။ ခရီးသွားရင် မသယ်နိုင်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဟာလေးတွေ သယ်တာပဲ။ လက်ဆောင်လည်းပေးတာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီကျမ်းမျိုးကို အိပ်ဆောင်လေး ထွက်လာလည်း ကောင်းမှာပဲလို့ တမ်းတမိတယ်။
အခန့်ကြီးက တစ်မျိုး၊ အလတ်စားလေးကလည်း တစ်မျိုး၊ အသေးလေးကလည်းတစ်မျိုး ကြိုက်ရာရွေးလို့ရတာပေါ့။ ပရိတ်သတ်အတွက် မူတွေ များနေမှာကို မပူပါနဲ့ နည်းနေမှာတောင် စိုးရိမ်ရသေးတယ်။ ရွေးချယ်စရာတွေ ပေါလေကောင်းလေပဲ။ အခြားလူပြန်ပြန်နေတဲ့(ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့) ဟာလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ထပ်ထပ်ပြီး ပြန်ကြစေချင်တယ်။
အတ္တကျော်။	။ နောက်တစ်ချက်မှာ ဆရာဖေမြင့်နှင့် ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော်နှင့် ဆရာမ မြနှောင်းညိုတို့ ထိုအပုဒ်တိုလေးများမှာ ထပ်နေကြရာတွင် ကိုယ့်လေနှင့် ကိုယ်၊ ကိုယ့်အာဘော်နှင့် ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ သုံးဦးစလုံး ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည့်အချက်မှာမူ ဘယ်သူနှင့်မှ သင်္ကာရှင်းစရာ၊ တောင်းပန်စရာ မလိုလောက်အောင် သေချာနေတာလည်း အမှန်ပင်။
အတ္တကျော်။	။ ကျွန်တော် အပင်ပန်းခံကာ ပြန်ဆိုထားသည်ကိုလည်း နှမျောသွားပါ သည်။ သို့သော် ဆရာတာ ရေးထားမှန်း ကျွန်တော် မသိလိုက်သကဲ့သို့ပင်၊ ဆရာတာ့ စာကို မဖတ်လိုက်ရသည့် စာဖတ်သူများလည်း ရှိနေနိုင်သေးသည်ကို တွေးမိရပါသည်။ အလားတူပင်၊ ဂျာနယ်ပရိသတ်နှင့် မဂ္ဂဇင်း ပရိသတ်တို့ မတူသည်ကိုလည်း သတိထားမိနေပါသည်။ ဂျာနယ်ပရိသတ်က အင်အားလည်း ပိုများပါသည်။
ဒီနေရာမှာလည်း အခြားလူတွေက နောက်ကလိုက်ပြန်ရင်တော့ ပိုးစိုးပက်စက် ဝေဖန်ပြီး ကိုယ်ကပြန်ဆိုမိထားတာတွေကျတော့ ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးပေးနေတယ်လို့ ထင်ချင်စရာကြီး စာဖတ်ပရိတ်သတ် အနေနဲ့ အဲဒီလိုတွေးလို့ရတယ်။ ဆရာ့ဘာသာပြန်ဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထက်ကလို ဆင်ခြေတွေ အမျိုးမျိုးပေးစရာရှိသလို အခြားသူတွေမှာရော တိုက်ဆိုင်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိမနေနိုင်ဘူးလား။ သူတို့ဘက်ကလည်း စဉ်းစားကြည့် ပါဦး။
ဆရာတို့ သုံးယောက်ကြားက တိုက်ဆိုင်မှုက တောင်းပန်စရာ မလိုလောက်အောင် သေခြာနေတယ်လို့ ဆိုလိုက်တော့ “ဟစ်လရီကလင်တန့် ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ” ကိစ္စမှာတော့ နောက်က လိုက်ပြန်မိတဲ့သူတွေက ဆရာ့ကိုတောင်းပန်သင့်တယ်လို့ ဆရာပြောချင်တာလား။ ဆရာရေးထားတဲ့ အခန်းဆက်တွေကို တည့်ကူးထားတာ မဟုတ်ရင် ဆရာ့စကားက လွန်တယ်ထင်တယ် ဆရာ။
“ဆူဒိုနင်က ပိုကောင်းမှန်းတော့ သိပါတယ်ဗျာ။ ကျုပ်တို့ စာအုပ်က သူ့ မမီပါဘူး”တဲ့။
အထက်ပါစကားလေးအပေါ်မှာလည်း သိပ်ပြီး မခံစားပါနဲ့ ဆရာ။ အချို့ဟာတွေက လောကဝတ်တရားအနေနဲ့ ပြောရတာပါ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်စာကိုယ် ပိုကောင်းတယ်လို့တောင် တွက်ချင်တွက်နေမှာ။ ချီးမွှမ်းခံရခြင်းဆိုတဲ့ လောကဓံတရားကို တရားနည်းလမ်းတကျ နှလုံးမသွင်းတတ်ပဲ သိပ်ခံစားလွန်းရင် လောဘတဏှာနဲ့ မာန ကိလေသာတွေ ဝင်တတ်တယ်ထင်တယ်။
အတ္တကျော်။	။ အကြောင်းမှာ ကျွန်တော်က ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ဖတ်မိရာမှ ခံတွင်း တွေ့သွားသည့်အတွက် စိတ်ပါလက်ပါ ပြန်ဆိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီး ဟိုတစ်ဖက်သားခမျာမှာတော့ ထုတ်ဝေသူက အပ်သဖြင့် မပြန်ချင်လည်းပြန်၊ ပြန်ချင်လည်း ပြန်ထားရသော ဘာသာပြန် ဖြစ်နေနိုင်သည့်အတွက်ပင်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ သရဖူမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဆရာ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဆောင်းပါးများကို ကြိုးစားပန်းစား ရှာဖွေပြီး စာအုပ်ဖြစ်အောင် အားထုတ်သင့်တယ် ဆရာ။ အဲဒါမှ ပရိတ်သတ်အတွက်လည်း ဖတ်စရာ မူကွဲ ၂-ခုရမယ်။ တာဝန်ပေးလို့ မပြန်ချင်ပြန်ချင် စာမူကတစ်ခု ခံတွင်းတွေ့လို့ စိတ်ပါလက်ပါ ပြန်ဆိုထားတဲ့ စာမူကတစ်ခုပေါ့။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို တကယ် စေတနာထားတယ်ဆိုရင် ဆရာ့စာမူတွေကို စာအုပ်ဖြစ်အောင် မဖြစ်အနေကို ကြိုးစားသင့်တယ်။ ပရိတ်သတ်အတွက် တာဝန်ကျေ စိတ်မပါလက်မပါ ပြန်ဆိုထားတဲ့ စာမူနဲ့ ပစ်စလက်ခတ် မထားသင့်ပါဘူး။ အဲဒါမှလည်း ဆရာရဲ့ အောက်ပါစကားလေးကို သက်သေပြရာကျမှာပေါ့။
“ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဘာသာပြန်ဖြစ်နေသည်မှာကား အစားကောင်းစားရသည့်အခါ ရင်းနှီးသူ မိတ်ဆွေများကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်သည့် စေတနာ သက်သက်မှတစ်ပါး အခြားမရှိပါ။”
အခြားစာအုပ်ကိုတော့ ပုတ်ခတ်ပြီး ကိုယ့်စာမူတွေကိုတော့ စာအုပ်ဖြစ်အောင် အားမထုတ်ရင် ဆရာက် ပြောရပြီးရော ပြောတဲ့သူပဲဖြစ်လိမ္မယ်။
အတ္တကျော်။	။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သူများ ပြန်ပြီးသားစာအုပ်ကို တစ်ဝက်တန်းလန်း ပြန်ပြီးဖြစ်သည့်တိုင် ကျွန်တော် ဆက်ပြန်မနေတော့ပါ။ ကျွန်တော့် အင်အားနှင့် ကျွန်တော့်အချိန်ကို နှမျောမိသလို ကျွန်တော့်မှာ အရှက် ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
တဝက်တန်းလန်းကြီးလည်း လုပ်သင့်တယ်ထင်ရင် ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကို အဲဒီလောက် လွှမ်းမိုးမနေသင့်ပါဘူး။ သူ့လမ်းသူလျှောက်ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ပေါ့။ လမ်းပြိုင်ပေါ်ရောက်လာကြတော့လည်း အပြိုင်အဆိုင် လျှောက်လှမ်းရုံပေါ့။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်နေသူအတွက်က အချိန်လည်း အပြုန်းတီးဘူး။ လုပ်အားလည်း မပြုန်းတီးပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် ခရီးရောက်နေတာပါပဲ။ ဒီထဲမှာ အဆိုးဆုံးက အရှက်ဆိုတဲ့ စကားသုံးသွားတာပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ အရှက်ရှိပါသည် ဆိုတော့ အခြားသူတွေကို အရှက်မရှိဘူး ဆိုလိုက်တာများလား။ အရှက်ဆိုတဲ့ စကားကို မကောင်းမှုပြုရမှာ ရှက်ခြင်း လို့ပဲ အကျယ်ဖွင့်ချင်တယ်။ ဆရာရည်ညွှန်းချင်သူတွေက မကောင်းမှု ဒုစရိုက် တစ်စုံတစ်ရာများကျူးလွန်မိလို့လား။ အဲလိုမဟုတ်ရင် ငါသာအရှက်ရှိ အခြားသူတွေ မရှက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရောက်အောင် မရေးသင့်ပါဘူး။ အဲဒါကိုလည်း ကျွန်တော်ကတော့ ရိုင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒါဆိုရင် ၂၀-၄၀ ကြား လူငယ်တွေက ဆရာ့ကိုမေးလိမ္မယ် ဆရာ့ရဲ့ နီတိဆရာက အဲဒီလိုကြီးတွေ သင်ပေးလိုက်လားလို့။
အတ္တကျော်။	။ ဟစ်လရီကလင်တန့် ကိုယ်ရေးအထုပ္ပတ္တိသည်လည်း ထိုအတိုင်း ဖြစ်သွားနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲဆိုလျှင်ဖြင့် မထောင်းတာပါ။ လူများများ ဝင်ပြိုင်လေ၊ ပျော်စရာကောင်းလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အခုဟာက ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ မဟုတ်ပါ။ စာအုပ်ထုတ်ကြသည့် ဈေးကွက်ထဲက ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ စာအုပ်ဈေးကွက်ကလည်း သိပ်အကောင်းကြီး မဟုတ်ပါ။ အမွှေးတိုင်ဈေးကွက်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်ဈေးကွက်လို ဖြုန်းအား မကောင်းပါ။
ဒီစာပိုဒ်မှာ ဈေးကွက်ကိစ္စပါလာပြီ။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ မတွေ့ရတော့ဘူး။ ဈေးကွက်သေးသေးလေးထဲမှာ ပထမတစ်အုပ်ထွက်ပြီးသွားရင် ငါ့ဟာရောင်းကောင်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ တွေးပူနေပုံပဲ။ ဒါမှမဟုတ် လက်မဦးတာကို ဝမ်းနည်းပြီး နောက်ဆုတ်ရကြောင်း အတည်ပြုပေးနေသလိုပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ပထမ စာအုပ်ကို မယှဉ်ဝံ့ပါဘူးလို့ ဝန်ခံနေသလိုပဲ။
အတ္တကျော်။	။ ထို့ကြောင့် ဤစာဖြင့် ဘာသာပြန်ဖော်များကို ကြေညာလိုက်ပါသည်။ မရှက်တတ်လျှင် လုပြန်ကြပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှက်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်ယောက် ဦးသွားသည်နှင့် ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ခရီးရောက်ခဲ့ရောက်ခဲ့ ကျွန်တော်ကပဲ အသာတကြည် (ကျေကျေနပ်နပ်) နောက်ဆုတ်ပေးပါမည်။
ရှက်ခြင်း မရှက်ခြင်းကို ဒီနေရာမှာ သုံးတာ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမကျဘူး။ အထက်မှာလည်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ဆုတ်ပေးတာကတော့ ရှင်းနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အသာတကြည်ဆိုတဲ့ ကြိယာဝိသေသနလေးကို ဆရာပြန်ပြီး ဆန်းစစ်ပါဦး တကယ်ရော အသာတကြည်ဟုတ်ပါရဲ့လား။ တသာတကြည် တကယ်ဟုတ်ရင် အခြားသူကို အရှက်မရှိတဲ့သူတွေလို့ ထပ်တလဲလဲ ပုံဖော်ထားတဲ့ ပို့စ်မျိုး ဆရာရေးသင့်လား။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ အသာတကြည်ဆိုတဲ့စကားက ရေးလို့သာရေးထားတာ တကယ်တော့ အတော်လေးကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့ နောက်ဆုတ်ပေးသွားတာပါ။
ကျေကျေနပ်နပ်ဆိုတဲ့ ကွင်းခတ်ထားတဲ့ ဝိသေသနလေးရော ဆန်းစစ်ပါဦး ဆရာ။ မကျေနပ်တာကတော့ အထင်အရှားပဲ။ ပိုစ်တစ်ခုလုံ အဲဒါတွေပဲ မြင်နေရတယ်။ မကျေနပ်ပါဘူး ဆိုတော့ရော ဆရာမှာ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့လဲ။ အဆိုပါ စာအုပ်ကို တစ်ဦးတည်း ဘာသာပြန်ခွင့်အတွက် အာဏာပိုင်တွေကလည်း ပါဝါပေးမထားဘူး၊ မူရင်းစာရေးဆရာဆီကလည်း တရားဝင်ဝယ်ယူမထားဘူးဆိုရင် ဆရာ့မှာ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိဘူး။ အခုလိုပို့စ်မျိုးရေးတာပဲ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လေ။ ဆရာ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဆရာ အပြည့်အဝ အသုံးချသွားတာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒီအနေအထားမှာ ကျေကျေနပ်နပ် ဆိုတဲ့ ဝိသေသနလေးက နာမည်ကောင်းရအောင် ကူညီလိမ္မယ် မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ။
အတ္တကျော်။	။ စာတိုပေစများကို ဘာသာပြန်ခြင်း (ဝါ) မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်အတွက် အပုဒ်တိုများ ပြန်ဆိုခြင်းမှာတော့ ထိုသို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘာသာပြန်သူတွေ ထပ်နေနိုင်ပါသည်။ အထက်တွင် ဆရာဖေမြင့်၊ ကျွန်တော်နှင့် ဆရာမ မြနှောင်းညိုတို့ သာဓကကိုလည်းကောင်း၊ ဆရာကိုတာ၊ ဆရာကျော်ဝင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့ သာဓကကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြပြီးပါပြီ။
အတ္တကျော်။	။ သေချာသည်မှာ စာအုပ်ကို ပြန်ဆိုသကဲ့သို့ အလုအယက် ပြန်ဆိုနေကြတာ မဟုတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သာဓက ပြခဲ့သော ဆရာများအနက်တွင်လည်း (ကျွန်တော့်ကို ဖယ်လိုက ဖယ်ထားပါဦး) ကျန်ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် စေတနာများ အသကအသကနှင့် သိက္ခာရှိစွာ ရေးသားနေကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆရာတွေထဲတွင် ငါးပွက်ရာ ငါးစာချတတ်သော အကျင့်မျိုးနှင့် သိက္ခာမဲ့သူ တစ်ဦးမှ မပါပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း ထိုဆရာများမှာ သူ့ပရိသတ်နှင့်သူ အခိုင်အမာ ရှိပါသည်။
အတ္တကျော်။	။ အပုဒ်တိုများမှာ ဘာသာပြန်များ ရိုးသားစွာ ထပ်နေတတ်သည်ကိုတော့ သဘာဝတစ်ရပ်ဟုပင် ကျွန်တော် မြင်ပါသည်။ ယခင်ကလည်း ထပ်ခဲ့ကြဖူးသလို နောင်တွင်လည်း ထပ်နေပါလိမ့်ဦးမည်။ အထူးသဖြင့် ရင်ခုန်သံချင်း၊ ခံစားချက်ချင်း၊ အကြိုက်ချင်း မနီးရိုးစွဲဖြစ်နေကြသည့် ခေတ်ပြိုင် မွေးဖွားကြီးပြင်းလာရသူများ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဖတ်မိသည့်အထဲမှ အကြိုက်ချင်းတူသည့် အပုဒ်များကို ပြိုင်တူဖြစ်စေ၊ မရှေးမနှောင်း ဖြစ်စေ ပြန်ဆိုဖြစ်သွားကြခြင်းဟု ကျွန်တော် နားလည်ခံယူပါသည်။
ဒါတွေကလည်း ကျွန်တော့အမြင်တော့ ဆင်ခြေသက်သက်ပါ။ တိုက်ဆိုင်တာလည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ ကိုယ်လုပ်၊ သူလုပ်စရာရှိတာ သူလုပ်။ တူချင်လည်း တူသွားမှာပေါ့။ ကိုယ်ကမှ မကူးရင် လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ နေသင့်ပါတယ်။ ရိုက်မစစ်ပဲ အစအနတွေ ထွက်နေတာလား လို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်က တွေးလိမ္မယ်။
အတ္တကျော်။	။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်က ဘာသာ မပြန်တတ် ပြန်တတ်နဲ့ လုံးစေ့ပတ်စေ့နီးပါး လျှောက်ပြန်ခဲ့တာမို့ အခု ကျွန်တော် ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးသမျှ မူရင်းစာအုပ်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်လေးကိုပဲ စုပြီး စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဟိုဆရာ့စာအုပ်ထက် အပုံကြီး ထူသွားနိုင်ပါတယ်။ သည်လောက် ထူထဲတဲ့စာအုပ်ကို အဲသလို တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ပြန်ဆိုနိုင်တာကိုက အဲဒီ့ဆရာရဲ့ အရည်အချင်းပါပဲ။ ကြည့်ရတာ မူရင်းစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ငါးပုံတစ်ပုံလောက်အထိ ခြုံ့ချလိုက်နိုင်ပုံပါပဲ။
လုံးစေ့ပတ်စေ့ပြန်သူနဲ့ တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းပြန်သူဆိုပြီးပြီး ဒီနေရာမှာ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကွဲနေပြီဆိုတာ ဆရာလည်းတွေ့နေပြီလေ။ ဟိုးအထက်က ဆရာဖေမြင့်၊ ဆရာမ မြနှောင်းညိုတို့နဲ့ တိုက်ဆိုင်ခဲ့တုန်းကလို သဘောထားပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကလေးကိုကိုယ် ဆက်လုပ်သင့်တယ်လို့ ဆရာမတွေးဘူးလား။ စာအုပ်ကြီးထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်က အဓိကဖြစ်နေလို့လား။ ပြန်လက်စကို ဆက်ပြန်သင့်ပါတယ်။ ငါဆန်ရောင်းနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ ဆန်ဆိုင်တစ်ခုတိုးလာလို့ ကိုယ့်ဆိုင်ကို ရိုက်ချိုးတဲ့ ဆန်သည်လိုဖြစ်နေမှာပေါ။ တိုတိုကျဉ်းကျဉ်း ဘာသာပြန်ထွက်ပြီးသားမို့ အထူကြီးနဲ့ မယှဉ်ဝံ့တာများလား။ ဒါလည်းတွေးစရာပဲ။
အတ္တကျော်။	။ ကျန်တာတွေ သိချင်သေးရင်တော့ အဲဒီ့ဆရာရဲ့ စာအုပ်ကိုသာ ရှာဖတ်တော်မူကြပါလို့သာ ပန်ကြားချင်ပါတယ်။ အဲလို ညွှန်းတဲ့အတွက် အဲဒီ့ဆရာက ကျွန်တော့်ကို လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်တောင် တိုက်ဖော်ရမှာ မဟုတ်သလို အဲဒီ့စာအုပ်ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တိုက်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်တောင် လက်ဆောင်ပေးဖော်မရမှာလည်း မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ သေချာလှပါတယ်။
ဟိုစာအုပ်က ပါးပါးလေး ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုပဲ ဆရာက ခနဲ့သလိုလိုကြီးရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့ ပါးတယ်ဆိုတာကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းကွက်လေးတွေရှိပါတယ်။ ဆရာတကယ်အကောင်းမြင်ရင် သေသေခြာခြာ ညွှန်းဆိုသင့်ပါတယ်။ သူ့ပါးပါးလေးကိုအားမရရင်လည်း ကိုယ့်ထူထူထဲထဲကြီးကို စာအုပ်အဖြစ် အမြန်ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အဲဒါမှလည်း စာပေသမားအချင်းချင်း ထားတဲ့စေတနာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ ထင်ရှားမှာပေါ့။ ဆရာကသာ စေတနာကောင်းနဲ့ ညွှန်းခဲ့ရင် (ဟိုးအထက်မှာ ဆရာပြောထားသလို အသာတကြည် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးလည်း နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရင်) ဆရာမျှော်လင့်နေတဲ့ လက္ဖက်ရည်တခွက်ကတော့ သောက်ရမှာ သေခြာပါတယ်ဆရာ။ (သူတို့မတိုက်လည်း အဲဒီစကားအတွက် /အဲဒီလုပ်ရပ်အတွက်/ ကျွန်တော်တိုက်မယ်။) စာအုပ်တစ်အုပ်ရဖို့ကတော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်ဘူး။
ကျွန်တော်က ဆရာ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ပရိတ်သတ်ပါ။
ကျမက မဂ္ဂဇင်းလောက်ပဲ အဖတ်များတာမို့ဂျာနယ်ပါ ကိစ္စတွေကို သိပ်မသိခဲ့ဘူး။ ခုလို ပြန်တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျမ အတွက်တော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်မိရပါတယ်။
13 November 2009 at 6:35 pm
ကျွန်တော့် Facebook ပေါ်မှာ သည် Post နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ရေးသွားတဲ့ comment တစ်စုံ
Htin Kyaw Aye: It is right to save one’s energy in translation if any other is trying to do so.
(On 12 November at 7:36pm)
Htin Kyaw Aye: I don’t think the literal translation is the same with narrative translation. There are many old stories retold by particular writer, but I suppose that the writer is worthy to ink his name for that stories. The personal feeling and particular writing style is the special read-worthy feature of the old stories.
(On 12 Novevmber at 8:18pm)
14 November 2009 at 5:21 am
ရွက်ဝါ တို့ ကတော့ နေရာတကာ လိုက်ငြင်းခုံနေတော့တာပဲ။ ပလန်းနက်မှာလည်း ပလန်းနက်မှာမို့ လို့ ၊ ဟိုနေရာ သည်နေရာ နေရာတကာမှာ …။
ကျွန်တော့် Facebook ပေါ်မှာ သည် Post နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ရေးသွားတဲ့ နောက်ထပ် comment တစ်ခု
Aye Khy: ကျွန်တော့်အထင်တော့ တစ်ချို့စာမူတွေကို အလုအယက် ငါးပွက်ရာ ငါးစာချ ဘာသာပြန်နေကြသလောက် ဘာသာပြန်ဖို့ရာ တကယ် လိုအပ်မှု ရှိနေသေးတဲ့ စာပေကဏ္ဍတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဟယ်ရီပေါ်တာဆိုတော့ ဘာသာပြန်လိုက်ကြတာ သုံးလေးငါးဦး။ အိုဘားမားဆိုလည်း ဘာသာပြန်လိုက်ကြတာ သုံးလေးငါးဦး၊ ဂျက်ဖရီဆက်၊ ဇာခါရီယာဆိုလည်း ပြန်လိုက်ကြတာ သုံးလေးငါးဦး၊ ကိုင်း… ဒီလောက် ဘာသာပြန်ဖို့ရာ စေတနာတော်တွေ ရှိနေကြရင် နိုဘယ်ဆုရ စာပေသမားတွေရဲ့ လက်ရာတွေကတော့ မြန်မာလို ဘာကြောင့် မရှိရလဲ၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ခေတ်ပြိုင်လက်ရာတွေက ဘာကြောင့် ဘာသာပြန်ပြီး မရှိရသလဲ။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမိတ်ဆက်စာအုပ်တွေ ဘာကြောင့် ဘာသာပြန်ပြီးသား မရှိကြရသလဲ။ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းလိုက်တာ…
15 November 2009 at 12:47 pm
စာအုပ်တစ်အုပ်တည်းကို ဘာသာပြန်ခြင်းဟာ အင်အားဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ စာရေးသူဘက်က ထင်သလို စာဖတ်သူတွေ မြင်တဲ့အမြင်ကလည်း ထပ်တူပါပဲ။ နိုင်ငံရပ်ခြား စာပေတွေကို စိတ်ဝင်စားလာစေမှုဟာ ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေရဲ့ အနုပညာမြောက်စွာ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာပေတွေကို နှစ်ခြိုက်စွာ ဖတ်ရှုခြင်းကနေ စပြီး မြစ်ဖျားခံပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဆိုတယ်ဆိုရာမှာ ပြန်ဆိုသူဟာ မူရင်း ဘာသာစကားရော၊ ပြန်ဆိုတဲ့ မိခင်ဘာသာစကားရော နှစ်မျိုးလုံးကို ထဲထဲဝင်ဝင် တတ်ကျွမ်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါမှလည်း မူရင်းစာရဲ့ ရသလည်း မပျက်ယွင်း၊ ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့ ဘာသာမှာလည်း အနှစ် အရသာရှိစွာ စာဖတ်ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဒီလို အဆီအနှစ် ပြည့်ဝတဲ့ ဘာသာပြန် စာအုပ်ကို ပရိသတ်ဆီ အရောက်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် ဖန်တီးနေရတဲ့ ပြန်ဆိုသူ့တာဝန်ဟာလည်း အင်မတန် ကြီးပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ပေးအပ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့၊ စာရေးသူရဲ့ စေတနာဖြစ်တဲ့ စာပေ့တာဝန်ပါ။ တာဝန်ကြီးတာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့ အင်အား၊ အချိန်၊ ဒါတွေအားလုံးကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံရတာပါပဲ။ စေတနာကြီးရင် ကြီးသလောက် အရင်းအနှီးကလည်း ကြီးပါတယ်။
အဲ … စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့လည်း စာတစ်အုပ်ကို လူအများကြီး ဘာသာပြန်နေတာထက် စာရင် စာရေးဆရာတစ်ဦးတယောက်ကပဲ နိုင်နိုင်နင်းနင်း၊ အဆီအနှစ် အပြည့်အဝနဲ့ အနုပညာမြောက်စွာ ဘာသာပြန်ထားတာကိုပဲ တန်ရာတန်ဖိုးပေးပြီး ဝယ်ဖတ်ချင်တာပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဟော… ဒီမှာလည်း တစ်အုပ်… ဟာ… ဟိုမှာလည်း တစ်အုပ်ဆိုရင်တော့ .. စာဖတ်သူအဖို့မှာ သူ ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်၊ စာအုပ်ရဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကို နှမြောတသစွာ အင်အားဖြုန်းတီးခံလိုက်ရတယ်လို့ တနုံ့နုံ့ ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြန်ဆိုတာ ၃ အုပ် ဆိုရင် ၃ အုပ်စလုံးကို ဝယ်ဖတ်ပြီးမှ ဘယ်သူပြန်တာ အရသာရှိတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မှာမို့ပါပဲ။ ဝယ်ဖတ်ဖို့ရာ ၁) ပိုက်ဆံကုန်မယ်၊ ၂) အချိန်ပေးရမယ်။ ၃) နောက်ဆုံး ဘယ်သူ့စာအုပ်က မူရင်း ရသကို ပေးတယ်မှန်း မသိတော့ရင် မူရင်းစာအုပ်ကိုပါ ဝယ်ချင်ဝယ်ဖတ်နေရမှာမို့လို့ပါ 😦
17 November 2009 at 8:13 pm
ရွက်ဝါ ပြောတာ စိတ်ဝင်စားစရာ စဉ်းစားစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဆရာ့ဘလော့ဂ်မှာ ဟို ဥပဿကာလို လူတယောက် အူတိအူကြောင် ကွန်မန့်တွေ လာရေးထားတာ ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ နီတိတွေ၊ ဘုရားတရားတွေ သိပ်ယုံကြည် ကိုးကွယ်လွန်းတဲ့သူတွေက သိပ်ပြီး အတွေးအခေါ် မပေါက်မြောက်တတ်ဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင် တွေးတောဆင်ခြင်တာ မရှိတော့ သူများ တွေးခဲ့တောခဲ့တာတွေကိုပဲ ကိုးကွယ်တတ်တာဆရာ။ ကိုယ်ပိုင် ဖြန့်ကျက် မတွေးတတ်တော့လို့ သူတစ်ပါးရဲ့ အတွေးထဲမှာပဲ ဝေ့လည်နေသူတွေပေါ့။
သူ့ဟာက ဟိုဘက်က လှည့်ပြောတော့လည်း တစ်မျိုးဝေဖန်၊ ဒီဘက်က လှည့်ပြောတော့လည်း တစ်ဖုံနဲ့ လိုရင်း ပျောက်ပြီး ဆရာ့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ချင်သလိုတောင် ဖြစ်နေတယ်။
နောက်ပြီး သိပ်ကြိုက်လို့ ကူးချတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ကို မဟုတ်ဘူး ဆရာ။ သူတစ်ပါး ဖန်တီးထားတဲ့ အလုပ်ကို ယူသုံးခွင့် ရှိပါတယ်။ သို့သော် အသိပေးပြီးမှ ယူသုံးသင့်တယ်။ တန်ရာတန်ကြေး တောင်းရင်တောင် ပေးပြီးမှ ယူသုံးသင့်တယ်။ မသိလိုက်ရင်တော့ တိတ်တိတ် နေလိုက်မယ်၊ သိသွားတော့ သိပ်ကို ကြိုက်လွန်းလို့ သုံးလိုက်တယ်ဗျာဆိုတာလောက်နဲ့ ဖန်တီးသူတယောက်က ကျေနပ်လိုက်ရမှာလား။ ဒါဆိုရင် သူ့မိန်းမကိုလည်း သိပ်ကြိုက်လို့ ယူသုံးလိုက်တယ်ဗျာဆိုရင် သူလက်ခံမလား၊ မသိဘူး ဟီးးဟီးး
ဒါမျိုးကျတော့ ဘုရားနဲ့ ကိုင်မတုတ်တော့ဘူးနော်၊ သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို ခိုးယူတယ်လို့… တွေးရခက်ကြီးပါပဲ။
အရေထူနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာ့အတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ မနေပေမဲ့ အရေပါးတဲ့ တပည့်ကတော့ မခံနိုင်ပေါင်…
Previous Previous post: The Origin of Jealousy
Next Next post: The Science of Love: Introduction